Ajajaan raayyaa waraanaa Zimbaabwee Chiweengaa paartii Zanu-PF akeekkachiisan - BBC News Afaan Oromoo
Ajajaan raayyaa waraanaa Zimbaabwee Chiweengaa paartii Zanu-PF akeekkachiisan
Goodayyaa suuraa Hogganaan waraanaa olaanaa Zimbaabwee jeneraal Kostantiinoo Chiweengaa Haraaree keessa yeroo dubbatan
Itti gaafatamtoonni paartii biyyattii geggeessu Zanu-PF'iin baalleessuuf hojjetaa kan jiran hundi hojii kana irraa akka of qusatan kan akeekkachiisan ajajaan raayyaa waraanaa Zimbaabwee, yoo kun ta'uudhaa baate waraanni akka keessa seenu dhaadatan.
Yaadi gidduu seenuu kun kan dhufe prezidaant Roobeert Mugaabeen itti aanaa isaanii Emarsan Mnaangaagwaa erga ari'atanii torban tokko booda ture.
Yeroo ammaa biyyaa baqatanii kan jiran obbo Mnaangaagwaan obbo Mugaabeetti aanuun taayitaan isaanitti darba jedhamanii kan eegaman turan.
Obbo Mugaabeen yeroo ammaatti taayitaa itti dabarsanii kennuuf filannoo isaanii kan taate hadha manaan isaanii Girees Mugaabee waa'ee obboo Mnaangaagwaan wayita haasoftu inni nama akka bofaati ''mataa isaa keessa rukutamuu qaba,'' jeteetti.
Si'aayina qaban irraa ka'uun maqaa moggoo ''naachicha'' jedhamu kan kennameef Obbo Mnaangaagwaan, Zanu -PF'iin ''akka barbaadde gochuuf qabeenya dhunfaakee fi kan haadha manaakee miti,'' jechuun Obbo Mugaabeen ifataniiru.
Goodayyaa suuraa Girees Mugaabee fi Pireezidantiin Itti Aanaa duraanii Mnaangaagwaan aangoo pireezidaantummaa dhaalu jedhamee eegama ture.
Waajjira olaanaa raayyaa waraanaatti haasaa kan godhan Geneeraal Chiweengaan, namoota qabsoo bilisummaa keessatti qooda fudhataa turan kan akka obbo Mnaangaagwaa hojii irraa ar'iuun dhimma obsaan bira darbamu miti jedhaniiru.
''Ari'annaan amma ifaa ifatti namoota seenaa qabsoo keessa qooda qaban irrattii xiyyeefatee deemaa jiru dhaabbachuu qaba,'' jechuun gazexeessitoota walitti qabamaniif ibsa kennaniiru.
''Warra shira kana duuba jiran hundi waanti isaan beekuu qaban yoo jiraate, warraaqsa keenya eeguuf yoomiyyuu waraanni itti galuuf shakkii hinqabu.''
Obbo Mnaangaagwaan kanaan dura ministeera ittisaa fi dhimma nageenyaa ta'aani hojjechaa turani.
Haati manaa Mugaabees, dargaggoota biraa deeggarsa qabdi, keessattuu ''dhaloota 40'ootaa'' yookaan gartuu ''G40'' gartuu siyaasaa Zimbaabwee biraa.
Jeneeral Chiweengaanis ''atakaaroo'' namoota siyaasa gidduu jiruu eeruun, ''kun waggoota shanan darban keessatti akka guddini qabatamaan tokko hindhufne godheera,'' jechuun dubbataniiru.
Zimbaabween rakkoo ''hir'ina maallaqaa fi qaala'insa gatii meeshaa'' waliin wallaansoo qabaa jirti jechuun dubbii isanii xumuraniiru.
'Dr. Abiy Kaagaameen Afriikaarraa keessummaan isaa jalqabaa' akka ta'uu fedhu
'Fistulaan abaarsa miti'
Intalli Maarti Luutar Kiing hojjetaa duraanii Tiraamp dubbiin xiqte
Phaaphaasichi erga himatamanii aangoo gadi dhiisuuf